विदेश जानको लागी पिसि-आर टेष्ट कुन-कुन अस्पतालमा गर्ने ? सरकारले दियो यस्तो जा नकारी – Ap Nepal
विदेश जानको लागी पिसि-आर टेष्ट कुन-कुन अस्पतालमा गर्ने ? सरकारले दियो यस्तो जा नकारी
April 29, 2021 785
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नेपालबाट विदेश जानेहरूका पिसिआर परीक्षण गर्न अस्पतालहरु तोकेको छ । मन्त्रालयले पिसिआर परीक्षण गर्न प्रयोगशाला भएका सरकारी अस्पताल र निजी क्षेत्रका छ वटा अस्पताल तोकेको हो। निजी अस्पतालहरूमा स्टार अस्पताल, ह्याम्स अस्पताल, मेडिसिटी अस्पताल, मनमोहन अस्पताल, टिचिङ हस्पिटल र यूनिभर्सल अस्पताल भैरहवा छन् ।
साथै मन्त्रालयले नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर तेस्रो मुलुक जाने विदेशीहरूको पिसिआर परीक्षण नगर्न सबै प्रयोगशालाहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले नेपाललाई ट्रान्जिट बनाउनेगरी आएका वा नेपालमा परीक्षण मात्रै गर्ने गरी आएका विदेशी नागरिकहरूको परीक्षण नगराउन सूचना जारी गरेको छ। यसरी परीक्षण गर्न आएकाहरूबाट संक्रमण जोखिम बढेको मन्त्रालयको ठहर छ।
त्यस्ता मानिसहरूको कुनै प्रयोगशालाले परीक्षण गरेमा नियम अनुसार कारवाही गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
पछिल्लो समय भारतमा संक्रमण दर उच्च भएका कारण विभिन्न मुलुकहरूले हवाइ सेवा बन्द गर्दा त्यहाँका मानिसहरू नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर तेस्रो मुलुक जाने गरेका छन्।
त्यसरी आएका मानिसहरूले नेपालमा पनि पिसिआर परीक्षण गराउँदै आएका थिए।अब भने मन्त्रालयले त्यसरी नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर आउने कुनै पनि विदेशी नागरिकको परीक्षण नगराउन सम्बन्धित सबै प्रयोगशालाहरूलाई निर्देशन दिएको हो।
Prevबिरामी भएका पत्रकार सन्तोष देउजा मिडि यामा, खा, समा के भएको थियो ? हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
Nextकृष्णबहादुर महराको छोरीले बुवालाई रोशनीले लगाएको आ रोपका बारेमा पहिलो पटक गरिन यस्तो खुलाशा (भिडि यो हेर्नुस)
दुर्घटना स्थलबाट भेटियो यति धेरै पैसा, मोवाल,ल्यावटप अरु के-:के भेटियो ( हेर्नुस भिडियो सहित )